Mon Petit Avatar: Tea houses in Yangon - 2
Let’s move on to another tea shop namely, Lucky Seven in Botathaung township. There, you find yourself inalittle garden, surrounded by shady trees, and plants but you will have to be careful for some cactuses, which are used as centerpiece decorative items. As for the tea, it is made in advance and I find italittle bit annoying, contrary to what my friend thinks: she really likes this kind of tea. A funny thing is that one day, I was drinking tea with my friends: we were talking, arguing, eating, drinking and finally decided to go back to their office after2hours of heated conversations. I looked around before I left the place, just in case I forgot something, and saw my other half, who was also there with his friends. We didn’t notice each other’s presence as we were sitting in different side of the shop. I greeted him, said goodbye and left him.
Here is the most expensive Chinese tea I have ever had in Yangon: 2,500 Kyats/pot available in Sky Bistro at Sakura tower. You will see the magnificent panorama view and that’s, for me, one good reason to go there.
I believe it doesn’t have to beagood time to drink tea and thus, on our way to airport, we were having tea at one tea shop situated inside the Chinese temple on Kabaaye Pagoda Road. Wouldn’t it be hard to believe that I gained weight after this trip?
Posted by Mon Petit Avatar at 9:05 AM
Labels: Food, Yangon
မွန်ကတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပေါင်းစုံကိုရောက်ခဲ့တာပဲ...။ နောက်တစ်ခါပြန်လာရင် ကပ်လိုက်မှနဲ့တူတယ်..။ ဟဲ..ဟဲ...
အဲဒီဆိုင်တွေ တစ်ခုမှ မသိဘူးဗျ၊ MPA က အတော်စုံတာပဲ..၊း)
“ကိုယ့်ရဲ့ အခြားတခြမ်း” ကိုတောင် မတွေ့မိတာက လက်ဖက်ရည်ကပဲ အရမ်းကောင်းနေ လို့လား၊ စကားဝိုင်းကပဲ အာရုံတွေကို စုစည်းထားလို့လား?းD
မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းသွားပြီ။အဓိက က လက်ဖက်ရည် ကိုပိုလွမ်းတယ်။
ချောကလက်ကိတ်က စားချင်စရာလေး၊ အမလည်း အိမ်ပြန်ရင် Lucky Seven မှာထိုင်လေ့ရှိတယ်။ ရွှေဂုံတိုင်က Lucky Seven လေ...။ သိတ်တော့ မသားနားဘူး ဒါပေမဲ့ မုန့် အရသာတွေကို ကြိုက်တယ်...
စားရင်း သောက်ရင်း ရိုက်ရင်း ငြင်းရင်းနဲ့ဘာမှသတိမထားဖြစ်သလို သူလဲ သောက်ရင်း ငြင်းရင်း ဘေးဘီကိုအာရုံမစိုက်ဖြစ်ဘူး။ အဲ သိပ်ကြည့်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်မှလဲမပါတာကြောင့်လဲပါမယ် ကိုညီလင်းသစ်။
လက်ဘက်ရည်ရယ် သူငယ်ချင်းတွေရယ် အားလုံးကို သတိရတယ် သားနဲ့သမီးတို့မေမေ June One ရေ။
ညီမ ရွှေဂုန်တိုင်က Lucky Seven ဆိုင် ရောက်ဖူးတယ်မမချစ်ကြည်အေး။ နန်းကြီးသုပ်စား ပြီးလက်ဖက်ရည်သောက် ပြီး နောက်တနေရာသွား တွေးကြည့်ရင် မဝ ဝအောင်ဒဏ်ပေးနေသလားမှတ်ရတယ် ဟီး။
Lucky7က အရင်က ဝါးပင်လေးတွေ ရှိတယ် မှတ်တာဘဲ
ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ခွဲတစ်ခုထင်ပါရဲ့ ဝါးပင်ရှိတာက ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းပေါ်မှာ ထင်ပါတယ်။
မွန်အခုရိုက်ထားတဲ့ ပုံထဲက ဆိုင်က ဗိုလ်ကလေးဈေးနားက ဆိုင်လားမသိနော်
ရန်ကုန်မှာတုန်းက ကိုယ်တို့ရုံးနဲ့နီးတော့ မကြာခဏ ထိုင်ဖြစ်တယ်
လက်ဖက်ရည် လွမ်းလာပြီ.. ပေါ့ဆိမ့်ကိုကြိုက်တယ်။
စားချင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကို ..
Lucky7က ကျကျလေး နှပ် ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်လေးရယ် .. ဆူးလေဘုရားလမ်း နှင့် ၃၃ လမ်း ထိပ် ဆာကူရာတာဝါက ကော်ဖီခါးခါးလေး သောက်ရင်း ရန်ကုန်မြို့လည် ညနေခင်း ရှုခင်းကိုလည်း ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဆာကူရာတာဝါ မြေညီအောက်ထပ် ဓာတ်လှေကားနားမှာ ရောင်းတဲ့ ဆင်းဒ၀စ်ကိုလည်း သတိရတယ်။
ကုိုယ်မသိတဲ့ဆုိုင်တွေများနေပါပေါ့။ မကျေနပ်ဘူးကွာ။ ကုိုယ်တုို့ အရင်တုန်းက အမြဲသူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ထုိုင်ဖြစ်တာက Black Canyon။ ကော်ဖီပါ။ လက်ဖက်ရည်ကတော့ ဆိုင်လှလှ နဲ့ မသောက်ဖူးသလောက်ဘဲ။ နေနှင့်ဦး။ အားလုံးမှတ်ထားတယ်။
ကုိုယ်ခွဲနဲ့ မတွေ့ ကြတာ ရီစရာ။း))
အခု Lucky7ကဗိုလ်တထောင် ၅ နားက ချောရေ။ သူကဆိုင်ခန်းတွေများသားနော်။
Sakura tower Ground floor ကSandwich မစားဖူးဘူး မမ။ စားချင်လာပြန်ပြီ။ ဝိတ်ချိန်တိုင်း ပြနေတဲ့ဂဏန်းတွေကိုသိပ်မကြည်ဘူး။ ဒါတောင် မနေ့က post ဖတ်ပြီး အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲချက်စားလိုက်သေးတယ် ဟီး။
Iora ရေBlack Canyon မရောက်တာကြာလှပြီ ရန်ကုန်မှာဈေးကြီးတယ်ထင်လို့သိပ်မသွားဖြစ်ဘူး။ ယောက်လမ်းထိပ်က ၃၆၉ လားမသိ ၂၄နာရီဖွင့်တဲ့ဆိုင်ကျတော့ လူငယ်တွေများတော့သိပ်မကြိုက်ဘူး။
လဘက်ရည်ဆို ချိုပေါ့ဆိမ့်ပဲနှစ်သက်တယ် ကော်ဖီကို လဘက်ရည်ထက် ပိုကြိုက်တယ် စားချင်စဖွယ်စုံစုံလင်လင်နဲ့ အပီကိုဧည့်ခံထားပါလားး)) ကျေးဇူးနော်။
ရန်ကုန်ကိုလွမ်းလိုက်တာ.. မရောက်ဖြစ်တာ ၆နှစ်တောင်ရှိပြီ။ ပုံတွေကြည့်ပြီး ပိုလွမ်းသွားတယ်။
အန်တီတင့်ရဲ့ ဆုတောင်းအတွက်လဲ အမြဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။